A afọ ole na ole gara aga, m dechara a nnyocha e mere online na ọ bụ n'ezie bụghị a ọrụ… ọ mara na mfe. Elere m ndị na-eweta ya anya ma bụrụ Typeform. Typeform bịara n'ihi na ndị guzobere chọrọ ịgbanwe ụzọ ndị mmadụ si aza ajụjụ na ntanetị site n'ime ka usoro ahụ bụrụ mmadụ na itinyekwu aka. Ọ rụkwara ọrụ. Ka anyị che ya ihu… anyị kụrụ ụdị na ntanetị ma ọ bụ ahụmịhe jọgburu onwe ya. Nkwado bụ mgbe